‘सरकारी पत्रकार’ सँग परराष्ट्रमन्त्रीको आक्रोस: अरु देशको प्रवक्ता बनेर कुरा गर्ने? - राजनीति - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
| ७ जेठ २०७६, मंगलबार
‘सरकारी पत्रकार’ सँग परराष्ट्रमन्त्रीको आक्रोस: अरु देशको प्रवक्ता बनेर कुरा गर्ने?
नेपालखबर काठमाडौँ बैशाख १९
समुद्री सतहबाट मुस्किलले ५० मिटरमात्र उचाईमा रहेको बेइजिङबाट ३ हजार ६ सय मिटर भन्दा बढी उचाईमा रहेको तिब्बतको ल्हासा पुग्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नेतृत्वको नेपाली टोलीको चीन भ्रमण जसरी अन्तिम समयमा तनावपूर्ण बन्यो, राष्ट्रपतिको भ्रमणबारे जानकारी दिन विहीबार अपरान्ह परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनको अन्त्यमा एउटा प्रश्नका कारण परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली त्यस्तै आक्रोस र तनावपूर्ण स्थितिमा देखिए।
मन्त्री ज्ञवालीले राष्ट्रपति भण्डारीको चीन भ्रमण र त्यहाँ भएका सहमति, गतिविधि र भ्रमणको महत्वबारे विस्तृतमा जानकारी दिइसकेपछि एक सञ्चारकर्मीले प्रश्न सोधे, ‘अब दक्षिणतिर फर्काैं। हामीले एकदम खुसीसाथ उत्साहपूर्ण तरिकाले बीआरआई प्रोजेक्ट आउँछ, आदि इत्यादि कुरा गरिरहेका छौँ। त्यसले दक्षिणतिरको सम्बन्धमा कस्तो किसिमको कम्पन ल्याउँछ वा गतिरोध? वा यो कुरा सहज ढंगले अघि बढ्छ?’
पत्रकारको प्रश्न भुइँमा झर्न नपाउँदै मन्त्री ज्ञवालीले प्रतिप्रश्न गरे, ‘यस विषयमा कसैसँग कुरा गर्नुभएको थियो? दक्षिणतिर कुनै रिजर्वेसन थियो भन्ने बारेमा?’
पत्रकारले जवाफ दिए, ‘छैन।’
पुन मन्त्री ज्ञवालीको प्रतिप्रश्नः ‘कि तपाईंको काल्पनिक प्रश्न हो यो? काल्पनिक प्रश्न हो भने जवाफ दिइरहनै परेन। तथ्य हो भने भन्नुहोला।’
पत्रकारले झिनो स्वरमा स्पष्टिकरण दिए, ‘अलिकति मिडिया (भारतीय) को कमेन्ट छ।
मन्त्री ज्ञवालीले जवाफ दिए, ‘यस्ता कुराहरुका बारेमा सोच्नु पर्ने जरुरी नै छैन। कृपया मेरो आग्रह के छ भने, उहाँ (भारतीय) हरुको चासो रहेछ भने हामीलाई जानकारी दिनुहोला। नत्र हामी किन अरु देशको प्रवक्ता बन्ने?’
मन्त्री ज्ञवालीले ‘अरु देशको’ भन्दै भारततिर लक्ष्यित गरेर यस्तो सवाल जवाफ गरिरहेका व्यक्ति खासमा एक सरकारी सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकार थिए।
मन्त्री ज्ञवालीले भन्दै गए, ‘नेपाल एउटा स्वतन्त्र मुलुक हो। यसले आफ्नो विदेश नीतिको परिभाषित गर्न, निर्माण गर्न, कस्तो बनाउने भन्ने तय गर्न र सञ्चालन गर्न स्वतन्त्र छ। हामीले भन्दै आएका छौँ, संसारका सबै देशसँग हाम्रो सम्बन्ध सुमधुर छ।’
आजैमात्र नेपालको इक्योटोरेल गुइनासँग कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको थियो, जुन नेपालको कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको १ सय ६५ औँ मुलुक हो। मन्त्री ज्ञवालीले यो प्रसङपनि जोड्दै अघि बढे, ‘जोसँग हाम्रो कुटनीतिक सम्बन्ध छ, ती सबै हाम्रा मित्रहरु हुन्। बाँकी रहेका मुलुकहरुसँग पनि हामी सम्बन्ध कायम गर्छाैँ। नेपालका प्राथमिकतामा आधारमा हामी तदारुकता लिन्छौँ।’
‘तपाईंले मित्रराष्ट्र भारतको कुरा गर्नुभो, उहाँ (भारत) हरुसँग हामीले क्रसबोर्डर रेलको सम्झौता नै गरिसक्यौँ, सम्झौता नै भइसक्यो, आन्तरिक जलमार्गका बारेमा सघन तरिकाले वार्ताहरु भइरहेका छन्। हामी बीबीआइएन फ्रेमवर्कभित्र छौँ, जसले चारवटा देश समेट्छ’ उनले भने, ‘त्यसैले, यस्ता हाइपोथेटिकल प्रश्नहरु नराखौँ। साथीहरु, जरुरी छैन। कसैले भन्नुभा’ छ भने मलाई सुनाउनु होला। आफै प्रश्न बनाएको छ, आफै तनावमा परेको छ। आफ्नै छायाँसँग किन तर्सिने? जरुरी छैन।’
यति जवाफ दिइसकेपछि उनले पत्रकार सम्मेलन सकिएको संकेत गरे, ‘मलाई लाग्छ, अब सकियो होला!’
राष्ट्रपतिको चीन भ्रमणबारे लिखित विवरणका साथ पत्रकार सम्मेलन सुरु गरेका मन्त्री ज्ञवालीले त्यसको वाचन सकिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भियतनाम–कम्बोडिया भ्रमणको तिथि घोषणा गरेका थिए। ‘आगामी मे ९–१३ सम्म प्रधानमन्त्रीले भियतनामको भ्रमण गर्नुहुनेछ’ उनले भने, ‘भियतनामका प्रधानमन्त्रीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा यो धेरै बर्षको अन्तरालमा हुन लागेको उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमण हो।’
मन्त्री ज्ञवालीका भनाईमा, यो भ्रमणको उद्देश्य भियतनामको आर्थिक विकासको अध्ययन गर्नु हो। ‘विगत ३० बर्ष यता भियतनामले जसरी तीब्र रुपमा आर्थिक विकास गरेको छ, लगानीका क्षेत्रमा सबैभन्दा आकर्षक गन्तव्यका रुपमा आफूलाई जसरी डोहोर्याइरहेको छ। र, युद्धको जर्जर अवस्थाबाट उठाएर आर्थिक पावरका रुपमा जसरी विकास भइरहेको छ’ उनले प्रष्ट्याए, ‘त्यससँगको सम्बन्ध र त्यसका अनुभवहरुबाट सिक्नका लागि हो।’
‘अर्काे एउटा लाभ हामीलाई के छ भने, त्यहाँका अधिकांस जनताहरु बुद्ध धर्मावलम्बी भएकाले भियतनामसँगको सम्बन्ध हाम्रा लागि पर्यटनलाई टेवा पुग्ने खालको छ, एक बर्षभित्र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनिसकेपछि सिधा हवाई सम्पर्कका ढोकाहरु पनि खुल्नेछन्’ मन्त्री ज्ञवालीले थपे, ‘त्यसैले भियतनामको विकासको अनुभवहरुबाट पाठ लिने, पर्यटन र लगानीका लागि प्रस्तावहरु अघि बढाउन यो भ्रमण हुन लागेको हो।’
भियतनाम सरकारले प्रत्येक बर्ष आयोजना गर्ने ‘अन्तर्राष्ट्रिय वैशाख समारोह (१२–१४ मे) को उद्घाटन कार्यक्रममा प्रम ओलीले सम्बोधन गर्ने बताएका ज्ञवालीले भियतनामका संस्थापक नेता हो चि मिन्हको स्मृतिमा स्थापित एउटा ‘थिङ्क ट्याङ्क’ ले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा मा पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्बोधन गर्ने जानकारी पनि दिए।
‘त्यसपश्चात १३–१५ मे सम्म कम्बोडियाको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ। त्यहाँका प्रधानमन्त्री हुन सेन एसिया प्यासिफिक सम्मेलनमा भाग लिन नेपाल आउनु भएको थियो’ उनले भने, ‘कम्बोडियाले पनि युद्धको जर्जर अवस्थापछि लगातार विकास गरिरहेको अवस्था छ। टुरिज्ममा लगातार विकास गरिरहेको अवस्था छ। त्यहाँ पनि ‘टुरिजम प्रमोसन’ का लागि सल्लाह गर्नुपर्ने देखिएको छ। त्यसलाई एक्स्प्लोर गर्ने, टेवा पु¥याउने उद्देश्य छ। भ्रमणका क्रममा केही डकुमेन्टमा सम्झौताहरु पनि हुनेछन्।’
राष्ट्रपतिको चीन भ्रमण र प्रम ओलीको हुनेवाला भियतनाम–कम्बोडिया भ्रमणबारे जानकारी पाएपछि पत्रकारहरुले चीनसँगको पारवहन सन्धि एबं प्रोटोकल सम्झौता र आगामी तातोपानी नाका खुलेपछि केरुङ नाकाको भविष्यबारे प्रश्न राखे।
‘पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा यस पटक हस्ताक्षर भएको हो। अब त्यो कार्यान्वयनमा आउँछ। हाम्रो तर्फबाट रुटहरु प्रयोग गर्ने, यताका हाम्रा पूर्वाधारहरु विकास गर्ने तयारी हामीले गर्नु पर्छ। कानूनी र व्यावहारिक रुपले पनि हामीले भोलिदेखि नै चीनसँग जोडिएका समुद्रहरु प्रयोग गर्न सक्छौँ।’ उनले भने, ‘त्यसमा कुनैपनि कानूनी जटिलता छैनन्। तर व्यावहारिक जटिलता छन्। व्यावहारिक रुपले हाम्रा पूर्वाधारहरुको विकासका लागि हामीलाई दायित्व थपिएको छ।’
मन्त्री ज्ञवालीका भनाईमा, चीनले आगामी जेठसम्म तातोपानी नाका खुलाउने गरी तयारी गरिरहेको छ। केही समयअघि मन्त्री ज्ञवाली, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठसहितको नेपाली टोली तातोपानी नाकाको निरीक्षणका लागि गएको थियो। यो प्रसङ्ग जोड्दै ज्ञवालीले थपे, ‘उहाँ (चीन) हरुको तर्फबाट लगभग सबै कामहरु सकिएको छ। उहाँहरुको जिम्मामा रहेको यताको सडक पनि उहाँहरुले बनाइसक्नु भएको छ। तर, हाम्रै यतापट्टि जुरेको पहिरोनिर र बाह्रबीसे वारिपट्टि कामहरु तीब्र रफ्तारमा गर्नुपर्नेछ। तर, यो मे महिनादेखि यो सडक खुल्छ।’
भूकम्पअघिको तातोपानी नाका र भूकम्पले पुर्याएको क्षतिपछिको तातोपानी नाकामा फरक के हुन्छ त?
‘पहिले भन्दा फरक के हुन्छ भने, सिधै कन्टेनरहरु तल सुख्खा बन्दरगाहमा आउँछन्’ उनले फरक छुट्ट्याए, ‘कन्टेनर सिधै सुख्खा बन्दरगाहमा आउने हुनाले पहिलेजस्तो कारोवार त्यहाँ हुँदैन होला।’
यति भन्दै उनले नेपालको तर्फबाट भन्सार, क्वारेन्टाइन, अध्यागमन सबैको तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
पत्रकारहरुको पारवहन प्रोटोकल अन्तर्गत नेपालले प्रयोग गर्न पाउने चिनियाँ बन्दरगाहको नेपालले कसरी फाइदा लिन सक्छ भन्ने प्रश्न पनि राखे। ‘चिनियाँ बन्दरगाहसम्मको दुरी कत्तिको सहज होला’ एकजनाले आशंकासहितको प्रश्न राखे, ‘यसको व्यावहारिक पक्षलाई कसरी हेर्ने? ‘चाइना कार्ड’ को रुपमा मात्र बन्दरगाह प्रयोग हुने हो कि?’
मन्त्री ज्ञवालीको जवाफ थियो, ‘समुद्रसँगको सिधा पहुँच कुनै पनि भूपरिबेष्ठित राष्ट्रको अधिकारको कुरा हो। त्यसलाई त्यसै रुपमा बुझ्नु पर्छ। यो कसैको विरुद्ध लक्ष्यित होइन। घरमा मूलढोका सँगसँगै पछाडिपट्टि जस्केलो पनि राखिएको हुन्छ। सबै खालको विकल्पको तयारी सामान्य खालका गाउँका किसानहरुले पनि तयारी गरिरहेका हुन्छन्। एउटा राष्ट्रले पारवहनका, व्यापारका सबै सुविधाहरु सम्बन्धी जति धेरै विविधता भयो, त्यति धेरै प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ्छ। त्यसैले कसैका विरुद्ध कसैको कार्ड प्रयोग गर्ने कुरै भएन।’
‘किन पारवहन सम्बन्धी प्रोटोकलमा सन्धि भएको तीन बर्षपछि मात्र हस्ताक्षर हुन सक्यो?’ मन्त्री ज्ञवालीमाथि तेर्सिएको अर्काे प्रश्न।
‘पारवहन सन्धि धेरै अगाडि गर्नुपथ्र्याे, हाम्रा अग्रहरुले गर्नुपथ्र्याे, धेरै ठूलो भूल भयो, प्रोटोकलमा किन चाँडै हस्ताक्षर हुन सकेन, त्यो सबैलाई थाहा छँदैछ, पारवहन सन्धि भएपछि सरकार ढल्यो’ उनले भने, ‘जहाँसम्म हाम्रो तयारीका कुरा छ, पारवहन सुविधा नहुँदापनि टाढा टाढाका ठाउँमा सडक सुविधा पुर्याउने, नाकासम्म हाम्रा स्तरीय सुविधा पुर्याउने सरकारको न्यूनतम दायित्वको कुरा हो। त्यसले हामीलाई घचघच्याएको छ।’
‘तातोपानी खुलेपछि सहजता, दुरी आदि हिसावले हाम्रो व्यापार यता (तातोपानीतिर) सर्ने पक्कापक्की छ’ सरकारी सञ्चारमाध्यममा काम गर्ने तिनै पत्रकारको प्रश्न थियो, ‘यस्तो अवस्थामा केरुङका लागि हामीले बाटो, पूर्वाधार लगायतका लागि जे लगानी गरेका छौँ, त्यसो भइसकेपछि केरुङको अवस्था के हुन्छ?’
उनले भने, ‘दुरीलाई कसरी नाप्नुहुन्छ? जस्तो अहिले एउटा परीक्षणपनि भयो। लान्जाओको ड्राइपोर्ट प्रयोग गर्ने कुरा अहिलेको प्रोटोकलमा छ। लान्जाओको पोर्टबाट १० दिनका कार्गाे ९ दिनमा सिगात्से र १० औँ दिनका केरुङ आइपुग्छ। त्यहाँबाट ४ दिनजतिमा तियान्जिन बन्दरगाह पुगिन्छ। अहिलेकै अवस्थाबाट पनि १३–१४ दिनमा केरुङसम्म ल्याउन सकिन्छ।’
उनले थपे, ‘अहिले तीब्र रुपमा भइरहेका पूर्वाधारहरु हेर्ने हो भने यो एउटा उपलब्धि हुनेछ। जहाँबाट सस्तो, सहज र छिटो हुन्छ, त्यहीँको बन्दरगाह प्रयोग गर्ने हो। भारतका पनि दुई बन्दरगाह प्रयोग भइरहेका छन्। दुरीका हिसावले कोलकता भन्दा बिशाखापटनम ६ सय किमी जति बढी छ। तर, नेपाली व्यवसायीहरुको भनाई के छ भने, कोलकता भन्दा बिशाखापटनम धेरै सजिलो छ। कार्गो मगाउन सहज र अन्य सुविधाका कारणले त्यहाँबाट २० प्रतिसत जति कार्गाे त्यहाँबाट आउन सुरु भइसक्यो। जताबाट सुविधा हुन्छ, त्यतैको बन्दरगाह प्रयोग गर्ने हो। त्यसलाई हामी हेर्दै जाउँला। त्यस हिसावले पनि धेरै बन्दरगाह प्रयोग गर्न नसकिने भन्ने होइन।’
यति जवाफपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण छिट्टै हुनसक्ने–नसक्नेबारे पत्रकारहरुले जिज्ञाशा राखे। किनभने, सुरुमै ज्ञवालीले ‘राष्ट्रपति सीले उपयुक्त समयम सुन्दर देश नेपालको भ्रमण गर्ने बचन दिएको’ सुनाएका थिए।
पत्रकारको प्रश्न– हाइलेवल भिजिटको वातावरण बनेको हो?
मन्त्री ज्ञवाली– सबै कुरा औपचारिक रुपमा नै आएका छन्।
पत्रकार– परराष्ट्रमन्त्री हुँदा कमल थापाले पनि यसै (राष्ट्रपति सीबाट छिट्टै भ्रमण हुन्छ) भन्नुभएको थियो नि!
‘देशको परिस्थितिले फरक पार्छ जहिले पनि, यस्ता भिजिटहरुमा। निरन्तर स्थायित्व भयो भने अप्ठेरो पर्दैन। एउटा सरकारसँग कुरा गर्ने, त्यो सरकार जाने भयो भने त...।’
त्यसपछि रेलको विषयले प्रवेश पायो। एकजनाले सोधे, ‘रेलको विषयमा राष्ट्रपति सी जिनपिङले पनि चासो राख्नुभयो भन्ने कुरा आयो। प्रत्येक पटक रेलकै कुरा गर्दा हाइड्रोपावर लगायत अन्य क्षेत्रमा आउनसक्ने लगानीका विषयहरुमा कमी भइरहेको जस्तो देखिन्छ। चिनिया पक्षले जारी गरेको विज्ञप्ती हेर्दा त्यसमा क्रमबोर्डर इकोनोमीको कुरा छ, तर त्यसमा रेलको कुरा छैन नि!’
पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री ज्ञवाली (बीचमा)
आजको डाटा हेर्दा नेपालमा परियोजनाको हिसावले, लगानीको हिसावले चीन नेपालको पहिलो लगानीकर्ता हो। भोल्युमका हिसावले सायद भारत पहिलो हो। तर, परियोजनाको संख्याको हिसावले चीन अगाडि छ जस्तो लाग्छ। जे होस्, दुबै देश हाराहारीमा छन्।
यो प्रश्नमा मन्त्री ज्ञवालीको जवाफ थियोः
केही परियोजना यस्ता हुन्छन्, जसले मुलुकको सामाजिक आर्थिक स्थितिमा ठूलो परिवर्तन ल्याउँछन्। ठूलो परिवर्तन ल्याउने परियोजनामा ध्यान बढी जान्छ नै। तर, यसको अर्थ अरु कुरामा ध्यान दिएका छैनौँ भन्ने होइन।
अरु विषयमा हामीले छलफल गर्यौँ कि गरेनौँ भन्ने कुरा ‘बेल्ट एण्ड रोड’ को फोरमको विज्ञप्ती हेर्दा देखिन्छ, पर्याप्त मात्रामा छलफल भयो। दुई पक्षीय कुराकानीमा पनि नेपालको विकासको बारेमा छलफल भएको छ। नेपालको विकासको तयारीका बारेमा हामीलाई जानकारी छ, तपाईंहरुलाई हामी सघाउन तयार छौँ भनेर उहाँहरुको कमिट्मेन्ट छ।
रेलमार्गको बारेमा सम्भवत यही बर्षदेखि सम्भाव्यता अध्ययन हुनेछ। सम्भाव्यता अध्ययन सकिएपछि डिपिआर र निर्माणको काम पनि अघि बढ्नेछ।
बीआरआई अन्तर्गत नेपालले के के फाइदा लिने तयारी गरेको छ?’ अर्का पत्रकारको प्रश्न।
ज्ञवालीको जवाफ थियोः एउटा रेल ल्याउने तयारी छ। अर्काे, अहिले हाम्रो मल्टिल्याटरिज्म् (बहुपक्षीयता) कमजोर भएको छ। नेपाललाई बहुपक्षीय फोरमको आवस्यकता छ। त्यस्ता फोरमबाट पनि हामीले नेपालको हित खोज्न सक्छौँ। यस्ता फोरमले ‘मल्टिल्याटरिज्म्’ लाई फोकस गर्ने कुरामा मद्दत गर्छ।
बीआरआईमा दीगो विकास र वातावरण परिवर्तनको कुरा अत्यन्तै महत्वपूर्ण ढंगले उठ्यो। त्यो चाहिँ नेपालको पनि चासोको कुरा थियो। यसमा केही ‘पोलिसी फ्रेमवर्क’ भित्र रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ।
दोस्रो कुरा, हामीले फाइदा लिने तयारीको कुरा हो, हामीले बीआरआई अन्तर्गत राख्न चाहेका परियोजनाहरुको बारेमा, हाम्रा प्राथमिकताका सूची उहाँहरुलाई हस्तान्तरण गरेका छौँ।
प्रकाशित १९ बैशाख २०७६, बिहिबार | 2019-05-02 20:50:41
एक सातामै कामीरिता दुईपटक सगरमाथामा शिखरमा
भैरहवा भन्सारबाट कसरी फुत्कियाे ६ टन लाेड भएकाे ट्रक?
औषधि उद्योगमा भिषण आगलागी
श्रोत नखुलेको ११ लाख रुपैयाँसहित दुई जना पक्राउ
नेटवर्किङ व्यवसायबाट ठगी गर्ने आठ भारतीय पक्राउ
‘अजेयराज सुमार्गीले ४ अर्ब ३२ करोड राजश्व तिरेनन्’
रवी लामिछानेले बनाउन लागेको अस्पताललाई साढे ६ लाख सहयोग
भारतीय लिगमा सावित्राको सनसनी जारी, सेमिफाइनलमा पनि ह्याट्रिक
मिडियासम्बन्धी विधेयकको पार्टीमा छलफल भएनः नेपाल
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले गत वैशाख २६ गते संसद्मा दर्ता गरिएको मिडियासम्बन्धी विधेयकका विषयमा पार्टीमा छलफल...
नागरिकतासम्बन्धी विधेयक यथास्थितिमा पारित हुँदैनः नारायणकाजी
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक यथास्थितिमा पारित गर्ने पक्षमा पार्टी नहुने बताएका छन्।
निर्वाचन सकिएलगत्तै भारतमा ‘एक्जिट पोल’ को विश्वसनीयतामाथि बहस
‘भाजपाका धेरै मतदाता शहरी, उच्च तहका, पढे लेखेका, युवा हुने गरेका छन्, उनीहरु ‘कन्फिडेन्स’ का साथ आफै आएर कुरा गर्न थाल्दछन्। गरिब, अनपढ र कम...
नेकपाका नेता भीम रावलले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा छलफलको आवश्यक रहेको बताएका छन्।
इरानलाई समाप्त गरिदिने ट्रम्पको चेतावनी
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानलाई समाप्त गरिदिने चेतावनी दिएका छन्।
‘प्रधानमन्त्रीले पत्रकारहरुको सरोकार सम्बोधन गरेर विधेयक लैजाने भन्नु भएको छ, अनावस्यक रुपमा विवाद उठ्न दिनु हुँदैन भनेर उहाँले भन्नु भएको छ,...
बजेट बनाउँदै गरेका अर्थमन्त्रीलाई १३ सुझाव
दीपक मनाङे फिल्म निर्माता, चलचित्र ‘पोइ पर्‍यो काले’
कस्तो हुन्छ यस वर्ष मनसुनी वर्षा ? यस्तो छ मौसमविद्को प्रक्षेपण
मच्छड धूप नबाली यसरी भगाउनुस् लामखुट्टे
विदेशिएका श्रीमान् २६ वर्षसम्म पनि फर्किएनन्